မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်အရေး MoU ရေးထိုးပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း ထွက်ပြေး ဘင်္ဂါလီများ ပြန်လည် လက? - Yangon Media Group
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အရေး MoU ရေးထိုးပြီးပြီ ဖြစ်သော်လည်း ထွက်ပြေးသွားသည့်ဘင်္ဂါလီများ ပြန်လည်လက်ခံမည့်ရက်ကိုမူ မပြောနိုင်သေးဟု ပြည်ထဲရေးအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ကဆိုသည်။ MoU ရေးထိုးနိုင်ရေး နှစ်နိုင်ငံအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ Horizon Lake View Hotel တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်းအစည်းအဝေးတွင် နှစ်နိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လုံခြုံ ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးကာ ကွယ်ရေးနှင့် ထိရောက်စွာအရေးယူ ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ပြဿနာများကို ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ စက်တင်ဘာအတွင်းက ARSA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နေအိမ်စွန့်ခွာ၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးသွားကြသူများ ကို ပြန်လည်လက်ခံရေး စသည်တို့ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သဘောတူညီချက်များကို MoU ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးတင်မြင့်က ပြောသည်။ ”အဓိကထားဆွေးနွေးတာက နိုင်ငံတကာရဲ့ သတ်မှတ်တဲ့ဥပ ဒေတွေ၊ နည်းဥပဒေတွေနဲ့အညီ ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲက နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံပြဿနာ တွေကို အလေးထားပြီးဖြေရှင်းဖို့ကိစ္စ၊ နှစ်နိုင်ငံကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သောင်းကျန်းသူတွေအပေါ် အဓိကထားဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံလက်ခံရေးကိစ္စတွေက တော့ နိုင်ငံတော်အဆင့်က ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့ လောက် လက်ခံမလဲဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး” ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မြင့်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်က ပြောသည်။
လဝကဘက်မှ NV ကတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက် သေခံကတ်ပြား)များကို ဟုတ်၊ မဟုတ် စိစစ်ပြီးလက်ခံမှာဖြစ်သလို ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင် တောတို့တွင် အမှန်တကယ်နေထိုင်သူ ဟုတ်၊ မဟုတ်စိစစ်ပြီးမှသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်ဦးတင်မြင့်ကဆိုသည်။ ”သူတို့ဘက်ကတော့ မြန်မြန် ရရင်ပို့ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန် တော်တို့ဘက်က Joint Working Group ဖွဲ့ဖို့ အစီအစဉ်လေးတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက် ကတော့ ဖြစ်နိုင်သမျှအားလုံးကို သူ့အဆင့်လိုက်သွားတာကိုပဲ အဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်”ဟု နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်း ဝန် ဦးကျော်ဇေယျက ပြောသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အာဆတ်ဒူဇမန်ခန်ကာ မာလ်ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် မြန်မာအစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ၂၅ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည် ဖြစ်သည်။
နည်းပြ လက်မဲ့ဖြစ်နေသော လက်စတာနှင့် အဲဗာတန်တို့ကို ကိုင်တွယ်ရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း ရိုင်ယန်
နယူးကာဆယ်ကို အရေးနိမ့်ပြီးနောက် လီဗာပူးချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီဟု ထင်မှတ်ခဲ့ကြောင်း ဘာနာဒိုေ??
မျိုးဆက်သစ်များမွေးထုတ်ပေးမည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ဗိုဗီနမ်ပြိုင်ပွဲ တတိယအကြိမ် က?